Madaxweynaha Jubbaland oo warbixin ka dhageystay guddiga doorashooyinka heer Federaal | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Jubbaland oo warbixin ka dhageystay guddiga doorashooyinka heer Federaal
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Moaxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa xarunta Madaxtooyada ee Magaalada Kismaayo kula kulmay masuuliyiinta Guddiga hirgalinta doorashada ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ee Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa Xubnaha labada Guddiga ka dhagaystay duruufaha iyo marxaladaha shaqo ee ay ku jiraan iyo sida ay ilaa hada shaqadu u socoto.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in shaqada Guddiga ay u dhacdo si hufan oo daah furan sida ugu dhakhsiyaha badan.
Ugu dambeyn, guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee Jubbaland ayuu ku amaanay Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam shaqada adag ee ay hayeen Guddiga maalmihii lasoo dhaafay.
warbixin ka dhageysi